Abaar Adag oo ku fool leh Degaanka Somalida – Rasaasa News
Jijig, July 29, 2012 [ras] – Wararka ka imanaya degaanka Somalida ayaa sheegay in ay ka jirto degaanka cabsi abaareed oo ku soo fool leh degaanka Somalida, ka dib kolkii la waayey roobkii Guga.
Afarta xili ee sanadka ayaa labo ka mid ah waxaa degaanka Somalida ka da,a roob, labo ka mid ahana waa roob la,aan. Hadaba sanadkan 2012 waxaa is raacay saddex xili oo roob la,aan ah, waxaana fooda uu la galay degaanka Somalidu diraac adag.
Horeba waxaa degaanka Somalida u quudin jirtay waaxda cuntada u qaabilsan UN-ta, taas oo bilowday cunto siinta guud ahaan degaanka Somalida xiliyadii ay degaanka ka jireen colaaduhu, waxayna wali Hayadu cunto siisaa inta badan degaanka Somalida.
Gabalada Shabeele, Doolo iyo Qoraxey ayey aad uga dayrinayaan Hayadaha samafalku, waxaana ay hayaduhu sheegayaan in dhibaatada ugu badan ee Abaartu ay noqonayso biyo la,aan xoog leh.
Hadii ayna dawladu samayn ku talo gal iyo tabaabushe cunto iyo biyo ku wajahan degaanka Somalida, marka la gaadho bilaha October iyo November 2012, waxay macaluuli saamayn doontaa milaayin qof oo ku nool meelaha ka fog fog dhulka ayna gaadhin dawlada gacanteedu.